Kani waa Money from Sweden | Money from Sweden
Kani waa Money from Sweden
Money from Sweden waa bog adeeg oo ay xukuumaddu maal geliso oo is barbar dhigaya lacagaha khidmada ah iyo sarrafyada ku aaddan dibad lacag u diridda. Swiidhan waxaa ka jira bangiyo fara badan, shirkado, wakiillo iyo rugo kale oo kuu oggolaanaya in aad dibadda lacag u dirtid. Hawsheennu waa in aan kuu helno adeegga ugu raqiisisan, uguna degdeg badan. Bogga adeeggu waa lacag la’aan, gebi ahaanna wuu ka madax bannaanyahay laacibiinta suuqa oo dhan, waxaana hawshiisa wadda Hey’adda macaamiisha (Konsumentverket).
Waxa ka dambeeya
Ula jeeddadeennu waa in aan xoojinno furnaanta iyo tartan xikmad ku dhisan in uu suuqa ka jiro si lacag dibadda loogu diro, waxa loogu yeero xawilaad ama lacag gudbin.
Waxaan sidoo kale dooneynaa in aan dadka ku baraarujinnodoorka muhiimka ah ee uu dadku horuumarka qeybo badan oo adduunka ka mid ah ka ciyaarayo iyadoo lacag loo dirayo qoyska iyo qaraabada.
Adeegga Money from Sweden ee Hey’adda macaamiishu (Konsumentverket) wuxuu ku saleysanyahay hawl ka timid xukuumadda, taasoo dhankeeda ay hawsha u dirsatay Qaramada Midoobay, QM. Bangiga aduunka iyo QM waxay dadka ku baraarujiyeen in lacag badan ay ku baxdo in lacag dibadda loo diro. Iyadoo la adeegsanayo adeegga is barbar dhigidda qiimaha ayey doonayaan in ay hoos u dhigaan kharashaadka si lacag badani ay u gaarto kuwa loo dirayo.